म एक २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको सम्पर्क शक्ति कम छ, के गर्ने होला ? - Sidha News
म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । तीन वर्षको प्रेमपछि हाम्रो मागीविवाह भएको हो । विवाहअघि हामीबीच यौ’नसम्पर्क सीमित रूपमा सुरक्षित हिसाबले भैसकेको थियो ।हाल विवाह भएको एक वर्ष पुग्यो । यौ’नसम्पर्क गर्दा मेरो श्रीमान्को वी’र्य स्ख’लन एक मिनेटभित्र एकदमै छिटो भैहाल्छ, जसले गर्दा म सन्तुष्ट हुन सकिरहेकी छै न। यसका लागि उपर्युक्त उपाय के हुन सक्छ ? यौ’नसम्पर्क सामान्यतः कति अवधिको हुन्छ ? यौ’नसन्तुष्टिलाई पोजिसनले फरक पार्छ कि ? हुन्छ भने कुन पोजिसनमा गर्न सकिन्छ ?
लिङ्ग योनिमा पसाएको ३० सेकेन्डमै वा एक मिनेटभन्दा कम समयमा वा ५ देखि १० धक्कामै वी’र्यस्खलन भए छिटो स्खलन भएको भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भए, तर अहिले आफू तथा आफ्नो यौ’नजोडीले चाहेको समयभन्दा निरन्तर रूपमा चाँडो वीर्य स्खलन भए त्यसलाई छिटो वीर्यस्खलन भएको स्थिति अर्थात् शीघ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । यो कुरा तपाईंको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
यौ’नसम्पर्कलाई कति समय लम्ब्याउने भन्ने कुरा दम्पतीमा भर पर्छ । महिलालाई चरम सुखको स्थितिसम्म पुग्न केही बढी समय लाग्न सक्छ, त्यसैले पुरुषले लिङ्ग प्रवेश गराएर यौ’नसम्पर्क सुरु गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त मात्रामा पाक्क्रीडामा संलग्न हुन सके तपाईंलाई सहयोग पुग्थ्यो । यो’निमा लिङ्ग नछिराई किन वीर्य स्खलन भएको होला ? प्रायः सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बेला वी’र्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् ।
घर्षण नै गर्न नपाई यो’निमा छिराउनासाथ वा छिराउनुभन्दा अघि नै वी’र्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौ’नसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा वीर्य स्खलन चाँडो हुनु नै शीघ्र स्खलन हो । तपाइले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार निरन्तर शीघ्र स्खलनको समस्या छ र तपाईंको यौ’नसन्तुष्टि प्राप्तिमै नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यसको पक्का कारण यही नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभए पनि अहिले शीघ्र स्खलनको मूल कारणको मानसिक नै भएको पाइन्छ । कतिपय मानिसमा यौ’नसम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको कारण हुनसक्छ । आफ्नी श्रीमती वा यौ’नजोडीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ताले समस्या बढाउँछ ।
यो समस्यालाई कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपाय छन् :
यौ’नसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिङ्ग यो’निबाट बाहिर झिकेर केही वेर यौ’नक्रीडालाई नै रोक्ने र यौ’न उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौ’नक्रीडा सुरु गर्ने ।
आशन परिवर्तन गर्ने: लोग्नेमान्छे माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर बसेर सक्रिय भै यौ’नसम्पर्क गरे पनि शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
यौ’नसम्पर्क गरिरहँदा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिंग यो’निबाट बाहिर झिकेर लिङ्गको फेदलाई बेस्सरी अँठ्याउने र वी’र्य स्खलन हुन नदिने। यौ’न उत्तेजना केही कम भएपछि पुनः यौ’नक्रिडा सुरु गर्ने ।
त्यस्तै कन्ड’मको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेलामा चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले बढी फाईदा पुर्‍याउँछ ।
वी’र्य स्खलनलाई पर्याप्त नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लागेपछि माथि भनिएजस्तै पहिले श्रीमती बढी सक्रिय हुने गरेर यौ’नसम्पर्क सुरु गर्ने अनि वी’र्य स्खलनको नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिती वा क्षमता हेर्दै विविध तरिका अवलम्बन गर्दै यौ’नसम्पर्कलाई अघि बढाउने ।